Toamasina : rano maloto, jiro tapaka,.. | NewsMada
Toamasina : rano maloto, jiro tapaka,..
Tsy mazava intsony mikasika ny Jirama eto Toamasina. Tsy misy renirano ritra ary ampy tsara ny orana aty an-toerana. Andaniny, vao tsy ela akory izay ny nitokanan’ny filohan’ny Repoblika ny milina lehibe hanampy tosika ny tanjaky ny herinaratra eto Toamasina, nomena ny anarana hoe “Jirambato“, noho izy fanomezana avy amin’ny tetikasa Ambatovy.
Mifanohitra amin’ireo anefa ny zava-misy ankehitriny satria mitohy ny fahatapahan-jiro, tsy ara-dalàna ny famatsiana rano ary manjaka ny tsy fandriampahalemana.
Ny alahady 29 janoary teo, nanomboka tamin’ny 5 ora 30 mn hatramin’ny 7 ora 10 mn, niloko mainty avokoa ny ranon’ny Jirama, sady maimbo gazoala. Niantso an-telefaonina ny talem-paritry ny Jirama Toamasina, Veloson Leonard, izahay hangataham-panazavana saingy tsy tratra antso. Ity farany matetika milaza fa izy irery ihany no azo angataham-panazavana manoloana ny raharaha tahaka izao. Ho an’ny olon-tsotra, nilaza fa fanaovan’ny mpiasan’ny Jirama tandrevaka ny asany ny mahatonga izao.
Tsy nitsitsy ny Fip
Mahazo vahana kosa ny asan-jiolahy sy ny haintrano nandritra iny herinandro lasa teo iny. Tsy nitsitsy ny polisin’ny Fip tarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules. Niisa dimy be izao ny tranga, ka nahafatesan’ny polisin’ny Fip jiolahy telo lahy ary nahatrarana basy iray. Miisa 12 ny jiolahy mpiara-dia tamin’ireo mbola karohina, telo voasambotra. Ampolony ny vaky trano sy fanendahana noho ny fanararaotana mandritra ny delestazy.
Na tsy nivoaka aza ny vokatry ny fanadihadiana, misy ny ahiahy amin’ny haintrano mitranga eto Toamasina, indrindra aorian’ny fahatapahan-jiro. Misy milaza fa miakatra ambony be ny tanjaky ny herinaratra. Nisy ny haintrano goavana niseho, ka tranon’olon-tsotra ny enina ary orinasa mpikirakira jirofo ny iray, ity farany izay nitranga ny asabotsy teo.